Solitaire-tserasera. Solitaire lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Solitaire-tserasera. Solitaire lalao
Na izany na tsy malalaka solosaina nanao karazana maro solitaire, ary izay efa nianatra ny hilalao hala solitaire, na doha, fa amin'ny fahatongavan'ny Ilay ao amin'ny Internet, ka solitaire lalao fahiny lasa isan-karazany kokoa. Ankehitriny isika dia afaka mifidy sy milalao karatra arcades sy lapa fahirano, sarina Mahjong. Ny lohahevitra hanome tsirony ny dingana, ary ho hitanao eo amin'ny sary karatra isan-karazany, lobaka avy amin'ny ranomandry Age, ny majika fitongilanana, ny mahery fo ny sarimiaina. Misy mihitsy aza ny ankizy ny tena tsotra solitaire lalao amin'ny Dora, Aquarium trondro, ny fivoaran'ny dinosaurs.
Tripeaks an'ny mpanjaka sy mpanjaka solitaire
Fanangonana Microsoft Solitaire
Mpanjakan'ny Spider Solitaire
Mahjong: izao tontolo izao fifaninanana
Lalao Solitaire tamin'ny Category:
Farany Solitaire-tserasera. Solitaire lalao
Ambony sy ambany Solitaire
Solitaire amin'ny Farm Farm
Lalao Online Rehetra Solitaire-tserasera. Solitaire lalao
Card Solitaire hatrany am-piandohana ny fisehoan-javatra ho amin'ny ankehitriny
izay tsy nilalao solitaire? Ny fanontaniana dia fa tsy miandry, satria io lalao karatra efa hatramin'ny ela ny fampiharana maimaim-poana eo amin'ny solosaina, dia mora ny misintona amin'ny smartphone, tablette na milalao solitaire amin'ny aterineto. Ny teny hoe "faharetana" manana frantsay fakany (faharetana), ka dia nadika hoe "faharetana." Misy karazana lalao no tena ka sarotra fa mitaky faharetana amin'ny birao nihazakazaka tsara. Fa maro ireo sy ny dikan-tsotra izay afaka hanampy ao anatin'ny minitra vitsy ao anelanelan'ny fotoana.
Na dia faharetana – ny Frantsay teny, dia mino fa ny toerana nahaterahan'i ny solitaire dia Alemaina na Skandinavia. Ny voalohany manonona ny lalao tany Alemaina tamin'ny taonjato XVIII ao amin'ny dikan-roa: Cabale sy ny faharetana. Nikaroka ny mpahay tantara iray ny lohahevitra ka nahita fa tany am-boalohany niara-nilalao solitaire, ary samy nanana ny tokotanin-tsambo.
Diniho ny efa misy dikan-tsy hahafinaritra – Dia alamina ao amin'ny jatony. Ary matetika dia aleon'ny olona tsy hilalao solitaire, ary ny fanampiana mba hampiasa ny sikidy. Afaka manao ny olana lehibe sy hanitatra ny sarintany. Raha ny tanana nandeha tsara, dia, ny valin 'ny fanontaniana dia eny, Ataovy ary. &Nbsp;
Browser solitaire karatra
Anisan'ny malaza indrindra virtoaly solitaire tsara rehetra;
Ny milalao no mahaliana, lobaka karatra sy ny loko fototra amin'ny foto-kevitra mahaliana. Ankizy misafidy ny hanehoana sarimiaina mpandray anjara, toy ny Halloween sy ny Krismasy foto-kevitra. Mampihomehy Piraty fijery, mifono zava-miafina, tamin'ny Moyen Âge, habakabaka solitaire karatra sy mifototra amin'ny tantara an-tsary. Fa ny olon-dehibe mpiloka hahita mahazatra ary na dia manaitaitra karatra, izay mpanjakavavy sy ny mpanjaka dia niakanjo mandro fitoriana atao sy Miaina teo amoron-dranomasina eo ambany hazo rofia.
Fa isaky ny lalao an-tserasera solitaire teny ny fitsipika izay hanampy ny lalan'ny ny gameplay. Misy nanorina-in sy ny fiofanana mialoha toro-hevitra na-roller. Mifidy ny pitsiny ny fampifanarahana, manana safidy samy hafa, toy ny zo hanafoana ny hetsika farany na Soso-kevitra ho amin'ny manaraka.
Solitaire – ny tonga lafatra ho namany isan'andro
Angamba mahafinaritra ny tena solitaire, dia ny fahazoana ka namelatra avy amin'ny toe-javatra rehetra. Raha teo aloha dia ilaina ny hitondra ny tokotanin-tsambo, ary hitady ny toerana nitokana, fa ankehitriny ny ankizy manana finday avo lenta, izay toerana tena mandrakariva hatolotrareo ny lalao.
toy izany safidy tsotra toy ny "Solitaire" na "hala" azo misokatra raha nisy fotoana malalaka, izay tsy maintsy ho zavatra hatao. Roa segondra, ary efa efa nanomboka hilalao solitaire maimaim-poana amin'ny aterineto. Ary ny matetika kokoa ianao manondro ho izany, ny za-draharaha kokoa ianao, dia lasa. Isaky ny haingana sy hiatrika soa aman-tsara ny asa ny fitadiavam-bola hevitra izay omena ho ny isan'ny hetsika mahomby sy haingana. Ny vokatra dia voatahiry ao amin'ny harato sy lasa firaketana an-tsoratra izay nikapoka ny mpandray anjara hafa mitady.
Solitaire ihany koa ny lasa toerana tena lalao ny mpiasa birao. Izy no avela ho variana nandritra ny minitra vitsy amin'ny olana amin'izao fotoana izao, mba haka aina amin'ny fahazarana. Nefa maro ka mpifoka fa sarotra ny hanakana ny fihanaky Manapa indray ary indray. Te-hilalao lalao iray hafa, ny farany, ary avy eo dia niverina mba hiasa araka ny marina. Fa ny farany, tampoka, tao amin'ny tsipika lasa bebe kokoa. Mahavariana, ny gameplay Afaka manohy ny mieritreritra momba ny olana lehibe. Ireo izay efa ela no mahalala ny Solitaire, manomboka manangona azy avy hatrany, tsy hieritreritra. Tsy izany ihany no tsy misakana, a, ary manampy mba hitady vahaolana ho an'ny lojika ny lalao sy ny foto-kevitry ny fandinihana.